ईकमर्स लिङ्क निर्माण कसरी गर्ने?
लिंक इमारत एक आदर्श तरीका हो जसले आफ्नो इ-वाणिज्य वेबसाइटमा ट्राफिक चलाउन सक्छ. यदि तपाईंको प्राथमिक उद्देश्य फर्काउने ग्राहकहरूबाट बिक्री बढाउनु हो भने, लिङ्क इमारतलाई तपाईले चाहिन्छ के चाहिन्छ. तल तपाईले केहि व्यावहारिक ई-कॉमर्स लिङ्क निर्माण गर्ने रणनीतिहरू काम गर्न सक्नुहुनेछ. तिनीहरू सबैलाई हेर्नुहोस् र तपाईलाई अपील गर्ने छनौट गर्नुहोस्.
इन्फ्लूएंसर आउटरीच रणनीति
लिङ्कहरू प्राप्त गर्न एक आसान तरीका प्रभावकारिता संग काम गरेर. एक प्रभावकारी कार्यक्रम चलाउँदै सबै प्रमुख व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने बारे सबै कुरा हो जसले तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई प्रासंगिक सामग्री प्रदान गर्न सक्छ - castrol a747 vs xr77 castrol. ती अनलाइन प्रभावकारिताहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न फोकस गर्नुहोस् जसले जानकारी र तपाईंको उत्पादन वा सेवाको बारेमा समीक्षाहरू साझा गर्न सक्छ. यदि तपाईं आफैलाई आउटरीच गरेर जस्तै महसुस गर्नुहुन्न भने, तपाइँ सधैँ एक व्यावसायिक लिङ्क इमारत वा प्रभावकारी फर्म भाडामा लिनुहुन्छ. तपाईं एक प्रभावकारी प्लेटफार्म संग साथै काम गर्न सक्नुहुन्छ. सामान्यतया, प्रभावपूला आउटपुटले निम्न पक्षहरू समावेश गर्दछ:
सम्भावित प्रभावकारिताको अनुसन्धान;
उस्तै दर्शकहरूसँग जोड्दै;
प्रलोभन प्रस्ताव तयारी गर्दै;
प्रस्ताव स्वीकार गर्ने प्रभावकारीहरूसँग काम गर्दै;
तपाईंको उत्पादन अभियान को ROI ट्रैकिंग.
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लक्ष्य विशिष्ट र यथासंभव यथार्थवादी हो. एक स्पष्ट र संक्षिप्त लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागी इ-कमर्स लिङ्क बिल्डिंग अभियान को सफलता या विफलता को बेहतर मूल्यांकन गर्न मा मदद गर्दछ.
समिक्षा साइटहरु को लाभ लिनुहोस्
समीक्षा साइटहरू सामान्यतया Google मा उच्च श्रेणीमा. उनीहरूले तपाईंको ईकमर्स वेबसाईसका लागि थप लिङ्कहरू साथै तपाईंको ब्रान्डमा विश्वास विश्वास र वफादारता बढाउन सक्छ. सामान्यतया, त्यहाँ दुइवटा आधारभूत समीक्षा साइटहरू छन्:
सामग्री समीक्षा साइटहरू (TechCrunch);
प्रयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री समीक्षा साइटहरु (Yelp, TripAdvisor).
यदि तपाईं समीक्षा साइटहरूमा सूचीबद्ध गर्न रणनीति सेट गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने, सेमील्ट विशेषज्ञहरूले अर्को चरणहरू पछ्याउँछन्:
प्रयोगकर्ता उत्पन्न गरिएको समीक्षा साइटहरूको सूची सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं लक्षित गर्न चाहानुहुन्छ;
निर्धारण गर्नुहोस् यदि तपाईंको कम्पनी पहिले नै सूचीबद्ध छ. यदि तपाईंको फर्मको लागि प्रोफाईल उपलब्ध छ भने निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई दावी गर्नुहुन्छ;
सोशल मिडिया र तपाइँको वेबसाइटमा समीक्षाहरू साझेदारी गर्नुहोस् किनकि तिनीहरू उपलब्ध भए.
सम्झनुहोस्, कुनै पनि समीक्षा ईमानदार हुन आवश्यक छ. नकारात्मक समीक्षाहरू लुकाउन वा मेटाउन प्रयास नगर्नुहोस् - यस्तो कार्यले पहिले नै अपमानित ग्राहकलाई अझ बढी निराश बनाउनेछ. उनीहरूको टिप्पणीहरू हटाउँदा, तपाईंले देखाउनुहुन्छ कि तपाइँ तिनीहरूको प्रतिक्रियाको बारे मा परिक्षण गर्दैन. टिप्पणी मेटाउन सट्टा, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न र बोल्न वाण.
सम्बन्धित आन्तरिक लिङ्कहरू निम्नस्तरको हुनुपर्दछ
माथि उल्लेखित सिफारिसहरू प्रभावकारीहरू र ग्राहकहरूका साथ पारस्परिक सम्बन्ध निर्माण गरी बाह्य लिङ्क इमारतसँग गर्न चाहन्छ। प्रयासहरू बेवास्ता गर्न सकिँदैन. एउटा प्लगइन स्थापना गर्ने विचार गर्नुहोस् जुन स्वचालित रूपमा प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रदर्शन गर्दछ. सम्बन्धित ई-वाणिज्य पृष्ठहरूमा सम्बन्धित उत्पादन विजेट थप्न मद्दत पुर्याउनेछ वेबसाइटमा खर्च भएको रूपान्तरण दर र समय बढाउनको लागि प्रयोगकर्ताहरूले अन्य वस्तुहरूको बारेमा विचार गर्दछन्.
कुन उत्पादन र सेवाहरू प्राय: सँगै खरिद गरिएका Google Analytics डेटा प्रयोग गरेर हेर्ने अर्को तरिका हो. यो निम्नानुसार कार्य गर्दछ: जब तपाईं जान्नुहुन्छ कुन वस्तुहरू प्राय: एकसाथ खरिद गरिन्छ, तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि अर्को पटक सिफारिस गर्ने.
त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि इन्टरनेसनरसँग राम्रो इ-कॉमर्स लिङ्क बिल्डिंगको साथ जोड्नु र धेरै समय चाहिन्छ। धैर्यता. यद्यपि, चाँडो वा पछिका तपाईंको प्रयासहरू बन्द हुनेछन्, र तपाइँले आफ्नो ईकमर्स स्टोरलाई Google को पहिलो पृष्ठमा देख्नुहुनेछ.